Dhata iwe ungangodaro usina kuziva nezveJK Rowling, munyori weHarry Potter | Zvazvino Zvinyorwa
Ini munguva pfupi yapfuura ndakaona vhidhiyo yaive yakanangwa kurudzira munhu wese kuteedzera zviroto zvake uye kuzadzisa zvinangwa zvavo zvakanyanya muhupenyu. Iyi vhidhiyo yaive yakapusa uye yakapusa sezvo yakaitwa neakareruka makatuni mavignettes umo hupenyu hwemunhu hwakarondedzerwa pasina kutaura zita ravo chairo. Mariri zvimwe zviitiko zvehupenyu zvakaonekwa, isu hatina kuziva kusvika kumagumo azvo, kana zvaive zvekunyepedzera kana chaicho ... Zvizhinji zvezviitiko izvi zvaive zvinosuwisa uye nemunhu ane mweya wakaderera kana neakaderera -kununura ndingadai ndakanyura pamutengo wekutanga wekutsinhana. Nekudaro, pakupera kwevhidhiyo, akazviwisira pamusoro pegumbeze uye hwakave hupenyu hwekupfupikisa pamusoro pemunyori anoteverwa nevateereri vevana-vechidiki: JK Rowling, munyori weiyo Harry Potter saga, pakati pemamwe mabhuku ...
Dzimwe dhata dzakarondedzerwa muvhidhiyo yakati ndidzo dzinotevera uye ndidzo dzinoiswa sezita rekuti: dhata raungangodaro usazive nezvaJK Rowling, kusvikira nhasi:
Pawaive nemakore 17 zvaive kudzingwa kuchikoro.
Pandaive nemakore gumi nematanhatu, amai vake vakashaya nekuda kwekurwara.
Pazera ramakore 26 akatambura kusununguka.
Pamakore maviri akaroorwa nemurume aimushungurudza uye aimushungurudza panyama uye nepfungwa.
Aive nemwanasikana yemuchato uyu.
Pamakore maviri akamhan'arira kurambana uye akaonekwa aine kushushikana kwakanyanya.
Pamakore makumi maviri nemapfumbamwe aive aine amai vasina murume , que Ndakagara ndichitenda kubatsirwa nerubatsiro rwemagariro.
Pana 30 ndakanga ndisingachakwanise kuitora futi aida kuzviuraya.
Neraki haana kubudirira uye kubva ipapo zvichienda mberi akazvipira iye oga kumwanasikana wake nekunyora, kuda kwake kwechokwadi.
Ndiine makore 31 chete akaburitsa bhuku rake rekutanga.
Pamakore maviri yakatanga mabhuku mana uye yakatumidzwa kunzi munyori wegore.
Pamakore maviri akatengesa mamirioni gumi nerimwe emakopi ebhuku rake idzva pazuva rekutanga.
Uye ikozvino, mushure mekuverenga iyi yese data ... Chii chaunowana? Saka kuti pazera ramakore makumi matatu wakaedza kuzviuraya kana kuti iwe wakanetseka miniti yega yehupenyu hwako kuti uite izvo zvawainyatsoda kuita?
Kunyora inogona kuve nzira yakanaka yekutiza kwete kungofungidzira chete asiwo kune mazuva kana mitsara inokwira kumusoro uye inoita kunge isina magumo. Rangarira: Rwira izvo zvaunoda! Nguva dzose nguva dzose…
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Chokwadi Chaungasaziva Nezve JK Rowling
Iye aisaziva zvese izvo chokwadi nezve hupenyu hwaJK Rowling, kunze kwekunge iye aisashanda uye achirarama nehupenyu. Mukadzi murombo. Ehe, iyo yakazvarwa ine nyeredzi. Ndiri kufara hupenyu hwake hwakatora shanduko iyi.
Pasina kubvisa imwe yeota yekufanirwa (anayo uye yakawanda), aive nerombo rakanaka kuti akakwanisa kuburitsa. Vangani vanhu vane tarenda vanoedza uye kuyedza uye havatombobudirira uye kana vakadaro, ivo havangakwanise kubudirira kweBritish? Ini ndinofungidzira zvakawanda kana zvakawanda.
Ndosaka akaedza kuzviuraya. Aivewo nerombo rakanaka rekusatora zvinodhaka nedoro (izvo zvandinoziva) kutiza chokwadi chake chinotyisa. Vanhu vazhinji vangadai vakazviita pachinzvimbo.
Kwaziso kubva kuOviedo uye nekutenda nenyaya yako inonakidza.
PS: iwe wakanyatsotaura. Unofanira kugara uchidzinga hope dzako. Kunyangwe vachiita senge vasingasvikike. Kusvikira yechipiri yekupedzisira. Kunyangwe vakaedza kukuodza moyo kana kukuramba.
Masikati akanaka Alberto! Ndafara kukuona uchitenderera pano zvekare 🙂
Mataura chokwadi, akave nerombo rakanaka… Nhasi uno anonyora bhuku risinganzwisisike uye vazhinji vacho vane hunhu hunopfuura hunokodzera kuburitswa mune chero muparidzi. Kunyangwe zvakadaro, haugone kubvisa hunhu, zvinopfuura pachena ...
Kutenda nekumira! Isita inofadza.
Kubvunzana nemunyori akazvimiririra Israel Moreno